Miara-miady amin’ny fahavalo iombonana… | NewsMada
Miara-miady amin’ny fahavalo iombonana…
Mbola momba ny fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ihany izao. Tsy mandreraka, tsy mankaleo, tsy mahakivy. Tsy avela raha tsy azo antoka fa resy tosika ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus, na ho ela na ho haingana. Tsy mamizana, tsy mahatofoka, tsy mahaketraka ny mampahatsiahy fa fahavalo iombonana ny iadiana, tsy hita maso, tsy mifidy olona, mamono.
Tena mila faharesen-dahatra sy fahamatorana ary fahavononana ny fiatrehana izany fa tsy azo tamoraina. Mila arahina manontolo sy amin’ny antsipiriany ny fepetra fisorohana. Ho an’ny tsirairay ao anatin’ny rehetra izany fa tsy anavahana na iza na iza. Eo koa ny fifampitokisana, ny fifanajana, ny faharetana… Ny tsy fitandremana kely ataon’ny vitsivitsy no mampidi-doza lehibe ho an’ny besinimaro.
Tsy tongatonga ho azy ny dingana misy ny firenena amin’izao fotoana izao: tena ady ny atao, anaovan’ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga vy very aina. Na eo amin’ny fihanaky ny valanaretina efa saika manenika ireo faritra manerana an’i Madagasikara izany, na ny fahombiazana amin’ny fisorohana sy ny fitsaboana: be lavitra no ho ny mbola tsaboina, ohatra, ny marary sitrana tanteraka.
Nefa amin’izany rehetra izany, mahavalalanina sy mahafanina: misy hatrany ny mitazam-potsiny, miandry kendry tohina amin’izay mety ho fahavoazana sy tsy fahombiazana amin’ny ady. Fihantsiana sy famakiana ady amin’ny mpitondra no atao? Na famendrofendroana, fanakiviana, fanakorontanana… Tapi-dalan-kaleha? Na lany hevitra sy afitsoka… Tsy ady amin’ny fihanaky ny valanareeina no atao.
Misy ny marary anaty amin’ny aretina hafa amin’izao? Tsy avela hifindra na hamindra. Tsy mahita afa-tsy lafiratsin-javatra tsinona, mitompo teny fantatra ho hany manana ny marina sy mahalala ny tokony hatao… Mitsikera sy manaratsy no hany ady eo? Na manoro vohony… Nefa vokatry ny ady anaty tsy voalamina ny ady ety ivelany. Mila mihiboka? Na ahiboka… Avela ho hitan’ny havany ho azy eo.